Izindaba - Isando esincane sikagesi siwuhlobo lwebhora lokujikeleza likagesi elijikajika ngokuphepha okunamathiselwe nge-pneumatic hammering mechanism.
Isando sikagesi kancane luhlobo lwegesi yesando yokujikeleza kagesi ephethe i-clutch yokuphepha enamathiselwe nge-pneumatic hammering mechanism.
Isando sikagesi kancane luhlobo lwegesi yokujikeleza isando sokujikeleza kagesi ngokuphepha okunamathiselwe okunamathiselwe nge-pneumatic hammering mechanism.
Isando sikagesi kancane luhlobo lwegesi yesando yokujikeleza kagesi ephethe i-clutch yokuphepha enamathiselwe nge-pneumatic hammering mechanism. Ingavula izimbobo ezingama-6-100 mm ezintweni ezilukhuni njengokhonkolo, izitini, itshe, njll., Ngokusebenza kahle kakhulu.
Izici zesando sikagesi kancane
1. Uhlelo oluhle lokumunca ukushaqeka: lungenza opharetha abambe kahle futhi aqede ukukhathala. Indlela yokufeza lokhu ngokusebenzisa "uhlelo lokulawula ukudlidliza"; isibambo senjoloba esithambile sisetshenziselwa ukukhulisa ukubambelela kokubambelela;
2.Iswishi eqondile yokulawulwa kwejubane: lapho inkinobho ithintwa kancane, isivinini sokujikeleza siphansi, okungasiza umshini ukuthi uphume kahle (ngokwesibonelo, ukukhipha endaweni ebushelelezi njengamathayili, angakwazi ukuvimbela kancane ekushibilikeni, kepha futhi uvimbele ukubhola ekuqhekekeni.Ijubane eliphezulu lingasetshenziswa ekusebenzeni okujwayelekile ukuqinisekisa ukusebenza kahle komsebenzi.
I-clutch yokuphepha eqinile futhi enokwethenjelwa: eyaziwa nangokuthi i-torque limited liming clutch, ingagwema amandla we-torque high reaction akhiqizwa ukunamathela kwe-drill bit ngesikhathi senqubo yokusebenzisa, okuwuhlobo lokuvikelwa kokuphepha kwabasebenzisi. Lesi sici futhi sivimbela iyunithi yegiya nemoto ukuthi ingami.
4.Isisetshenziswa esibanzi sokuvikelwa kwezimoto: ukusetshenziswa, akunakugwenywa ukuthi izinto eziyimbudumbudu eziyimbudumbudu zizongena emshinini (ikakhulukazi ukubhola phezulu emshinini, njengokubhola phezulu kodonga). Uma imoto ingenakho ukuvikelwa okuthile, kulula ukuthi iphulwe noma iklwebhwe yizinto ezilukhuni ngokushintshana ngejubane, okuzoholela ekugcineni ekushayekeni kwezimoto.
5. Umsebenzi wokudlulisela phambili nokubuyela emuva: ungenza isando sisetshenziswe kabanzi, futhi ifomu laso lokuqaphela litholakala ngokushintsha noma ngokulungisa isikhundla sebhulashi lekhabhoni. Ngokuvamile, amathuluzi amakhulu emikhiqizo azolungisa isikhundla sebhulashi lekhabhoni (elijikelezayo lesibambi sebhulashi), elinenzuzo yokusebenza okulula, ukucindezela okusebenzayo kwezinhlansi ukuvikela umgibeli futhi kwandise impilo yenkonzo yemoto.
I-Twist Brill Bits
I-twist drill iyithuluzi lokucubungula imbobo elisetshenziswa kakhulu. Ngokuvamile, ububanzi busukela ku-0.25 mm kuye ku-80 mm. I engela Kuvunguza twist sokuprakthiza ikakhulukazi kuthinta ubukhulu ahlabayo onqenqemeni hala engela, amandla blade futhi chip ukususwa ukusebenza, okuyinto ngokuvamile phakathi 25 ° no-32 °.
1. Ngokuvamile, kusetshenziswa i-black drill bit ukubhoboza insimbi, kanti nezinto zokuprakthiza ziyinsimbi enejubane elikhulu. Ukubhola ezintweni ezijwayelekile zensimbi (i-alloy steel, i-non-alloy steel, i-cast iron, i-cast iron, i-non-ayoni) isetshenziswa kanye ne-steelworking drill bit. Kodwa-ke, kufanele kubhekwe ukubhola ezintweni zensimbi, futhi ijubane lokujikeleza akumele libe phezulu kakhulu, okungashisa kalula onqenqemeni lwento yokubhola.
Manje kunelinye igolide elifakwe ifilimu yensimbi eqinile engajwayelekile, eyenziwe ngensimbi yensimbi nezinye izinto futhi yaqiniswa ukwelashwa kokushisa. Ithiphu ligaywe ngama-engeli alinganayo ezinhlangothini zombili bese libuyiselwa emuva kancane ukuze lenze onqenqemeni olubukhali. Ayikho insimbi, i-iron ne-aluminium eqiniswe ukwelashwa kokushisa. I-Aluminium kulula ukunamathela esicongweni sokubhola futhi idinga ukuthanjiswa ngamanzi anensipho ngesikhathi sokubhola.
2.Ukubhola ezintweni zokhonkolo nezinto zamatshe, ukusetshenziswa kwe-drill yomthelela, kuhlanganiswe ne-drill bit bit, i-cutter head material ngokuvamile i-carbide eqinisekisiwe. Indlu ejwayelekile, ungabhobozi odongeni lukasimende, sebenzisa okwejwayelekile kwe-10 mm ukucaciswa kwesandla kagesi.
3. Shayela izinkuni. Lapho kubhola ezintweni ezenziwe ngokhuni, kuhlangene nokusetshenziswa kwezingcezu zezinkuni, izingcezwana zezinkuni zinomthamo omkhulu wokusika ivolumu, futhi ubulukhuni bamathuluzi okusika akudingeki ukuthi bube phezulu. Izinto zokusika amathuluzi ngokuvamile ziyinsimbi enejubane elikhulu. Kunethiphu encane maphakathi nethiphu yebhithi, futhi ama-engeli ezinhlangothini zombili makhulu kakhulu, nangaphandle kwe-engeli. Ukuze uthole isikhundla esihle sokulungisa. Eqinisweni, ukubhola kwensimbi nakho kungabhola izinkuni. Ngoba izinkuni kulula ukuzishisisa futhi ama-chips akulula ukuphuma, kuyadingeka ukwehlisa ijubane lokujikeleza futhi kuvame ukuphuma ukukhipha amachips.
4. I-ceramic tile drill bit isetshenziselwa ukubhoboza izimbobo ku-tile ye-ceramic nengilazi ngobulukhuni obuphakeme. I-Tungsten carbon alloy isetshenziswa njengezinto zethuluzi. Ngenxa yobulukhuni bayo obukhulu nobulukhuni obubi, kufanele kunakwe ekusetshenzisweni kwejubane eliphansi nokungasebenzisi umthelela.
Ingxenye yokusika ye-drill flat ifosholo emise, ngesakhiwo esilula nezindleko zokukhiqiza eziphansi. Uketshezi lokusika lungeniswa kalula emgodini, kepha ukusebenza kokusika nokususa i-chip akulungile. Kunezinhlobo ezimbili zokuzivivinya okuyisicaba: okuhlanganisiwe nokuhlanganisiwe. Uhlobo oluhlanganisiwe lusetshenziselwa ikakhulukazi ukubhola ama-micropores anobubanzi obungu-0.03-0.5mm. Iqoqo elihlanganisiwe le-drill blade liyashintshwa futhi lingapholiswa ngaphakathi. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukubhola izimbobo ezinkulu ngobubanzi obungu-25-500 mm.
I-Deep Hole Drill
I-hole hole drill imvamisa iyithuluzi lezimbotshana zokuchofoza ezinesilinganiso sokujula komgodi ukuya kububanzi bomgodi singaphezu kuka-6. Kuvame ukusetshenziswa izibhamu, i-BTA Deep hole drill, i-jet drill, i-DF hole hole drill, njll. ekusetshenzisweni komgodi ojulile.
I-reamer inamazinyo ayi-3-4, futhi ukuqina kwayo kungcono kune-twist drill. Isetshenziselwa ukukhulisa imbobo ekhona futhi ithuthukise ukunemba kwemishini nokuqeda.
I-drill yesikhungo isetshenziselwa ukubhoboza imbobo ephakathi nendawo yomsebenzi wokusebenza. It empeleni yakhiwa twist sokuprakthiza futhi indawo facer nge encane helix engela, ngakho ibizwa nangokuthi kwakwakhiwa isikhungo sokuprakthiza.
Ukwakhiwa kwe-drill yigama elijwayelekile le-hammer drill kagesi kanye ne-simenti drill. Isetshenziselwa ukuvulwa kokhonkolo, udonga nezinye izinto zokusebenza. Ukubukeka okujwayelekile kuyisibambo esiqondile, kanti ikhanda lishiselwe ngekhanda le-alloy cutter. I-blade ayinakho ukuvula. Izikhala kuphela.
Kunezinhlobo ezimbili zokubhoboza izinkuni. Enye yazo ukubhola ngokhuni. Okunye ukubhoboza amapulangwe okusebenza ngokhuni. I-Woodworking twist drill ngokuvamile ibizwa ngokuthi i-woodworking drill, enezipikha ezi-3 ekhanda nenaliti ende phakathi. Zombili izinhlangothi zifushane ngokuncipha. Ikhaba linokuvula. Ikhanda lokubhoboza ipulangwe liyisicaba. Kunembobo encane phakathi. Phezulu kufana nenaliti. Akukho mkhawulo wokusika. (empeleni, i-blade isemikhawulweni yomibili yekhanda eliyisicaba, elinokuvulwa okumise okwehlukile.) Kunezinhlobo ezimbili zezinhlanga, ezijwayelekile nezinxanxathela.
Ijubane le-steel drill bit lihlukaniswe laba yi-shank twist twill ngqo ne-taper shank drill. Ukulingana kwe-shank.